AJ Cronin. Ememe ncheta nke onye dibia na onye edemede nke Scottish | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
AJ Cronin. Ememe ncheta nke onye dibia na onye edemede nke Scottish
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | ọtụtụ
Anyị niile nwere akwụkwọ n’ụlọ Archibald Joseph Cronin. Ma ọ bụ nchịkọta nke akụkọ ha n'ọtụtụ dị mma nke akwụkwọ mma yabasị na pastes. Chọpụta. Ọfọn taa, nke a Dọkịta na onye edemede nke Scotland M gaara emezu 122 afọ. Ọ bụ ezigbo onye ode akwụkwọ na 40s na 50s na otu n'ime ndị mbụ m, ka anyị kwuo ma ọ bụ pekarịa, akwụkwọ ndị toro eto bụ Ihe omimi nke obere akpa ojii na mkpuchi. Taa, m na-enyocha aha ya ndị ọzọ na ebe nchekwa nke ọnụ ọgụgụ ya.
Ndụ abụghị ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe, nke anyị na-esi aga njem na enweghị mgbochi, ma labyrinth nke amaokwu, nke anyị ga-ahụ ụzọ anyị, furu efu na mgbagwoju anya ugboro ugboro araparawo a nwụrụ anwụ ọgwụgwụ.
Mana, ọ bụrụ na anyị enwee okwukwe, Chukwu ga-emepe ụzọ mgbe ọbụlagodi na ọ nwere ike ọ bụghị nke anyị chọrọ, n'ikpeazụ ọ ga-adịrị anyị mma.
2 Onye nnochite anya na-arụ ọrụ
2.1 Ihe omimi nke obere akpa ojii
2.2 Ulo elu
2.3 Igodo nke Alaeze
3 Aha ndị ọzọ
Amụrụ n’ime Ido Scotland na Julaị 19, 1896. Ọ chọrọ ịbụ onye edemede site na nwata, mana o kpebiri ịgbaso ndụmọdụ ezinụlọ wee debanye aha na ọmụmụ ihe ọgwụ na Mahadum Glasgow. Na Agha Worldwa Mbụ ọ jere ozi dị ka dọkịta na Navy, ma mesịa mee ya Obodo ndị na-egwupụta Wales.
Emek onye nyocha ahụike nke mines ma nye ya ọrụ ịmụ mkpa nke ọrịa ngụgụ na mpaghara ebe a na-egwupụta akụ na Great Britain na 1924. Ahụmahụ ahụ na nke sochiri mgbe ọ na-eme ihe na agbata obi ndị bourgeois na London jeere ya ozi ogologo oge dị ka isi iyi nke mmụọ nsọ maka ọrụ gị. Akwụkwọ akụkọ ya agwakọta ihe omuma na ihe omuma nke ndi mmadu.
N’afọ 1930, na ezumike ike ya, ọ malitere ọrụ ya dika ode akwukwo Lọ ukwu nke ịkpọasị, nke gara nke ọma. Mgbe ahụ ọ fọrọ nke nta ka ọ jikọtara mbipụta nke akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ dị ka Atọ n'anya, Na agwaetiti Canary N’okpuru kpakpando nile.
Ma mgbe ama ama ụwa wee Ulo elu na Igodo nke Alaeze. N'ime ha, ọ kọọrọ ya nchegbu okpukpe ya na ahụmihe ya dịka dibia. A sụgharịrị akwụkwọ akụkọ abụọ ahụ gburugburu ụwa wee mee fim. Ihe ịga nke ọma nke mmegharị ihe nkiri a dugara ya ibi nwa oge na Hollywood, ma emesịa ọ laghachiri Europe, na Usọ mmiri French, ma mechaa lara ezumike nká Switzerland, ebe ọ nwụrụ 1981.
Onye nnochite anya na-arụ ọrụ
Ihe omimi nke obere akpa ojii
En 16 akụkọ Cronin na-agwa anyị akụkọ banyere dọkịta ahụ Hyslop finlay en Levenford, ekpri obio Scotland. Finlay, onye dọkịta na-eto eto, na-abịa dị ka onye na-enyere ndị agha aka na ndị isi ike dọkịta cameron. Ọ bụ usoro ederede na-amalite site na ntinye Finlay na a tracheotomy mberede emere na ọnọdụ nhụsianya na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ nwata nwoke na ọrịa diphtheria. Ya mere, na njedebe ebe nwekwara igbu mmadu n'etiti.
De dị mfe ọgụgụEnweghị ụkọ mmetụta uche ma ọ bụ ịkpa ọchị na obere obere eluigwe na ụwa na mkpụrụedemede mara mma nke obere obodo Scottish. Burukwa n'uche gburugburu na oge nke a na-eme ihe ahụ.
Ọzọ protagonist bụ nwa okorobịa dọkịta, dọkịta Andrew Manson, onye rutere maka ọrụ mbụ ya na obodo ebe a na-egwupụta akụ̀ ndị dị na Wales. Gị idealism na ịnụ ọkụ n'obi ga-adịghị anya a ga-anwale ule na ị ga-fọrọ nke nta ka njedebe, n'elu chọpụtara eziokwu nke oke ịda ogbenye na enweghị ụzọ maka ọgwụgwọ ahụike na mpaghara ahụ. Mgbe ị nwere ọtụtụ nsogbu ị na-ekpebi ịkwaga London, ebe ọ na-aga n'ihu na-enyere ndị ọrịa na-arụ ọrụ aka. Mana otu onye ọrụ ibe ya gwara ya ka ọ rụọ ọrụ na a ọgaranya ụlọ ọgwụ.
Akwụkwọ a nwere ike ịbụ nke kachasị mkpa nke Cronin, ebe o nwere mmetụta dị ukwuu n'okike nke oge a Usoro ahụike nke mba site na United Kingdom.
Edere m na La Ciudadela n'echiche m banyere ndị ọrụ ahụike, ikpe na-ezighị ezi ya, oke ochicho ya, isi ike ya, nzuzu ya ... Ahụla m ihe egwu niile m na-akọ ebe a. Site na akwukwo a achoghi m ikwuputa onye obula, kama obu usoro.
Afọ mgbe ebipụtara ya a mmegharị ihe nkiri onye duziri Eze dị. Ha gụrụ kpakpando na ya Robert Donat, Rosalind Nwokocha y Rex Harrison n'etiti ndị ọzọ. Nke oké ihe ịga nke ọma, ọ na-nominated maka 4 edemede nke Oscars: kasị mma film, kasị mma omee (Donat), kasị mma direction na kasị mma na-emegharị ihuenyo.
Igodo nke Alaeze
Chebara nke ya echiche ọkaibe, akwụkwọ akụkọ a kọọrọ ndụ nke nna Francis Chisholm, okpukpe Scottish a na-adịghị ahụkebe. Ya mere, anyị gafere oge ọ bụ nwata rue oge ọdachi nke na-akpọte ọrụ ya: nke ya ọrụ ozi ala ọzọ na China n'oge oke mkpagbu, ụnwụ nri na agha obodo.
Ọ bụ emegharị ahụ na sinima na 1944 nwere otu aha. Duziri ya John M Stahl ma kpakpando n'ime ya Uche Gregory, nke nwetara aha onye omee kacha mma na Oscars nke 1946.
Aha ndị ọzọ
Ọkara Robert Shannon
Onye na-elekọta Spanish
Na-acha akwụkwọ ndụ afọ
Ili nke obe
Lọ ukwu nke ịkpọasị
Onye Isi Pence Song
Promụ nwoke na-atụ aro (theaterlọ ihe nkiri)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » AJ Cronin. Ememe ncheta nke onye dibia na onye edemede nke Scottish
Ernest Hemingway. 119 afọ ọmụmụ ya. Iberibe ọrụ ya
Ndị nchoputa 10 ị gaghị enwe ike ịkwụsị ịgụ akwụkwọ n'oge ọkọchị a